Famatsiam-bolan’ny propagandy: nankasitraka ny mangaraharan’ny kandidà ny komitin’ny Dina | NewsMada
Famatsiam-bolan’ny propagandy: nankasitraka ny mangaraharan’ny kandidà ny komitin’ny Dina
Noderaina manokana na tsy izy rehetra aza. Nitondra ny fahitany sy ny fanaraha-maso nialoha sy nandritra ary ny aty aorian’ny fifidianana ny komitin’ny Dina nampanasoniavina ireo kandidà. Nisy noderaina manokana ireo mpilatsaka hofidina.
« Mankasitraka tanteraka ny kandida isany: Rabary Andrianiaina Paul, Radilofe Mamy Richard , Rasolofondraosolo Zafimahaleo na i Dama, Beriziky Jean Omer, i Zafivao Jean Louis sy i Tabera Randriamanantsoa izahay satria nampiseho mangarahara tsara izy ireo momba ny famatsiam-bolan’ny fampielezan-kevitra », hoy ny fanambaran’ny komitin’ny Dina nampanao sonia ireo kandidà tamin’izao fifidianana filoham-pirenena izao. Nanterin’ny fanambarana fa voalohany izany mangarahara momba ny famatsiam-bolan’ny kandidà teto amintsika izany. « Mendrika atao ohatra izy ireo ka haharitra io fomba fanao tsara io. Fantatsika fa tombontsoa lehibe ho an’ny firenena izany », hoy ihany izy ireo. Nankasitrahan’ny komity manokana koa ny fanetren-tena sy ny fiandaniana amin’ny filaminana asehon’ny kandidà Rabary Paul, nanaiky ny vato azony raha vao nanomboka ny fanisam-bato. “Nanentana ireo kandidà mpifaninana aminy izy hanaiky ny voka-pifidianana ary tsy ho tompon’andraikitra hiteraka korontana, hampitondra faisana indray ny firenentsika”, hoy ihany izy ireo. Niaiky koa anefa ity komitin’ny Dina ity fa niseho ny tsy fahatomombanana maro araka ny hita, ny zava-nitranga voatatitra, ny fahasorenana, ny fitarainana teo amin’ny mpandray anjara tamin’ny fifidianan sasany. “Tratrantsika ny fanamby amin’ny ankapobeny ary tao anatin’ny fitoniana azo ekena izany”, hoy izy ireo.
Miantso ny kandidà hanaja ireo mpifidy
Ankoatra izany, miantso ny rehetra ho tony eo am-piandrasana valim-pifidianana fihodinana voalohany izy ireo. Mba hosorohina amin’ny fomba rehetra ny fihantsiana sy ny fanoherana, mety hiteraka krizy vaovao. Miantso ireo kandidà 36 mba hanaja ny vahoaka malagasy sy ny mpifidy ny komitin’ny Dina. “Tokony hitsahatra avy hatrany ireo fanodikondinana saim-bahoaka momba ireo mety ho tsy fahalavorariana tamin’ny fikarakarana fifidianana. Nanana fahafahana nametraka delege isaky ny biraom-pifidianana ireo kandidà ka tokony hanana PV. Tokony ho tsapan’ny kandidà fa tsy mihodina eo amin’ny tenan’izy ireo ihany ny fifidianana fa lokan’ady goavana ho an’ny Malagasy manontolo. Aoka izy ireo hanatsahatra izay mety ho fikasana hanao sorona ny vahoaka noho ny fitiavan-tena sy ny tanjona politikany avy”, hoy izy ireo.
Tsy hampidi-kizo indray ny firenena
Nentanin’izy ireo ireo mpisehatra rehetra amin’ny fanajana ny lalàna sy ny fanaovana fitoriana araka ny voalazan’ny lalàna. “Aoka isika rehetra ao amin’ny andraikitra misy antsika avy, ho olom-pirenena hivoy filaminana sy demokrasia fa tsy ho tompon’andraikitra hampiditra ny firenena ao anaty ny kizo indray ka tsy ho tafarina intsony isika”, hoy izy ireo.
Tsiahivina fa anisan’ny ao anatin’ny komitin’ny Dina ny CFM, ireo fiarahamonim-pirenena, ny Ceni, ny CNIDH, ny Samifin, ny Bianco, ny HCDDED, Justice et Paix…